Akụkọ - skillszụta nka nke akụkụ akpaaka
Skillszụta nkà nke akụkụ akpaaka
1. Lelee ma nkwonkwo ahụ dị mma. N'oge njem na nchekwa nke akụkụ ahụ mapụtara, n'ihi ịma jijiji na nkukota, iwe, iwe na mgbaji na-apụtakarị na ngalaba njikọ
Mmebi ma ọ bụ mgbawa, na-emetụta ojiji nke akụkụ. Lezienụ anya iji chọpụta mgbe ịzụrụ.
2. Lelee ma ụghalaahịa zuru ezu. Ọdịdị ngwungwu nke ngwaahịa dị mma dị mma, aka aka na igbe mbukota doro anya na agba agba agba na-enwu gbaa. A ga-edebanye igbe na akpa na aha ngwaahịa, nkọwa na ihe nlereanya, oke, ụghalaahịa edenyere aha, aha ụlọ ọrụ, adreesị na akara ekwentị, wdg. Ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-emekwa akara ha na ngwa. Akụkụ ụfọdụ dị mkpa, dị ka igwe na-enye ọkụ, onye na-ekesa ya, mgbapụta mmanụ ọkụ, wdg, nwekwara akwụkwọ ntuziaka, asambodo na akara nyocha iji duzie ndị ọrụ iji jiri ma debe ya. Mgbe ịzụrụ, ị kwesịrị ịmata ya nke ọma iji zere ịzụrụ ngwaahịa adịgboroja na nke dị ala,
3. Lelee ma akụkụ ndị na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe. Mgbe ị na-azụta mgbapụta mmanụ na akụkụ ndị ọzọ na-agbagharị, jiri aka tụgharịa ihe mgbapụta ahụ, nke kwesịrị ịdị na-agbanwe ma nweere nkwụsị. Mgbe ị na-azụta bekee na-agbagharị, jiri otu aka kwado mgbanaka dị n'ime ma jiri aka nke ọzọ gbanwee mgbanaka dị na mpụga. Mgbaaka nke mpụta ga-enwerịrị ike ịgbagharị ọsọ ọsọ na nnwere onwe, wee kwụsị iji nwayọọ nwayọọ na-agbagharị. Ọ bụrụ na akụkụ ndị na-agbagharị agbagharị anaghị arụ ọrụ nke ọma, ọ pụtara na nrụrụ ime ma ọ bụ nrụrụ dị n'ime, anaghị azụta.
4. Lelee ma elu nchebe dị mma. A na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ ya na mkpuchi nchebe na ụlọ ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-echebe pin pistin na agba ohia site na paraffin wax; a na-ekpuchi elu nke piston ring na cylinder liner na mmanụ antirust, a na-ejikwa valvụ na piston ahụ na mpempe akwụkwọ na-ekpuchi ma tinye ya na akpa plastik mgbe etinyechara ya na mmanụ antirust. Ọ bụrụ na aka uwe mebiri emebi, akwụkwọ nchịkọta na-efu, mmanụ antirust ma ọ bụ paraffin furu efu, ekwesịrị ịlaghachi ma dochie ya.
5. Lelee akụkụ geometric maka nrụrụ. Akụkụ ụfọdụ dị mfe nrụrụ n'ihi nrụpụta na-ezighi ezi, njem na nchekwa. Mgbe ị na-elele, enwere ike ịgbanye akụkụ osisi ahụ na efere iko ahụ iji hụ ma enwere ọkụ ọkụ na nkwonkwo dị n'etiti akụkụ na iko iko iji kpebie ma ọ gbagọrọ agbagọ; mgbe ị na-azụta efere igwe ma ọ bụ efere esemokwu nke efere a na-ejigide, ị nwere ike ijide efere nchara na esemokwu ahụ n'ihu anya gị iji hụ ma ọ gbagọọ. Mgbe ịzụrụ akara mmanụ, njedebe ihu nke akara mmanụ na usoro kwesịrị ịbụ nke gbara gburugburu, nke nwere ike daba na iko dị larịị na-enweghị ntụgharị; Mpụga nke akàrà mmanụ na - enweghị ntụkwasa kwesịrị ịbụ nke aka kwụrụ ọtọ ma gbanwee. Ọ kwesịrị inwe ike ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ ya mgbe ịhapụ ya. Na nzụta ụdị pad dị iche iche, kwesịrị ị paya ntị na ịlele ụdị ọdịdị na ọdịdị geometric
6. Lelee ma akụkụ mgbakọ na-efu. Nkịtị nzukọ akụkụ ga-zuru ezu na-emebibeghị iji hụ ezigbo nzukọ na nkịtị ọrụ. Ọ bụrụ na ụfọdụ akụkụ ntakịrị n'akụkụ ụfọdụ nke mgbakọ na-efu efu, akụkụ mgbakọ ahụ agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna kpụchaa.
7. Lelee ma elu akụkụ dị nchara. The elu nke ruru eru akụkụ ahụ mapụtara nwere ma a ụfọdụ nkenke na-eji ire ụtọ imecha. Ihe dị mkpa karịa akụkụ ahụ dị mkpa, nke ka nkenke dị elu, ma na-agbasikwa nkwakọ mgbochi nchara na mgbochi corrosion ike. Lezienụ anya iji chọpụta mgbe ịzụrụ. Ọ bụrụ na akụkụ ahụ achọpụta na enwere nchara, ebe eburu ma ọ bụ akụkụ roba na-agbawa ma ghara ịdị na-agbanwe, ma ọ bụ na e nwere ahịrị ngwongwo doro anya na akwụkwọ akụkọ ahụ, a ga-anọchi
8. Lelee ma akụkụ njikọta adịghị. Maka ngwa ndị mejupụtara akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa, a na-apịa akụkụ ahụ, glued ma ọ bụ ịgbado ọkụ, anaghị ekwe ka ịtọghe dị n'etiti ha. Dịka ọmụmaatụ, a na-achịkọta ihe mgbapụta mmanụ na ogwe aka na-achịkwa site na ịpị, a na-agbazi wiilị a na-agbanye na mpempe akwụkwọ na ígwè nchara, a na-agbazi efere esemokwu na nchara ígwè; a na-ejikọ akwụkwọ nhazi ihe mpempe akwụkwọ na akwụkwọ nza; A na-agbanye eriri waya nke akụrụngwa eletriki. Ọ bụrụ na achọta ịdị larịị ọ bụla n'oge ịzụta, ọ s